Abkhaz Black Sea esifundeni bekulokhu futhi cishe uyohlale othandekayo iholidi kwabaningi abantu bakithi. Uma ufuna phakathi ngamaholide ukujabulela emkhathini okumsulwa kanye sezulu emangalisayo, promenades enhle, manicured, ehlanzekile amabhishi enakho, kuyikhambi elingcono kakhulu lenkinga kungaba uhambo resort emangalisayo Gagra. Lena indawo adalwe imvelo kuze kube iholidi ngaphambi omkhulu - edolobheni ine ijamo side elikuvumela ukuba ukhethe noma iyiphi indawo 7 amakhilomitha ngasogwini ukuchitha iholide ongasoze walibaleka, okuthakazelisayo futhi ahlukahlukene.
Kuhle iholide Wik izivakashi ezivela emhlabeni wonke ungakwazi ukuhlela eziningi kanye zokungcebeleka of Gagra ngokusebenzisa amazing imvelo, ngesimo sezulu esihle futhi ebukeka olunothile, simema isikhathi eside uhamba kahle. Eyokuqala yalezi zindlu egibela uvele engaphezu kweyikhulu edlule, futhi iye ayazise Omkhulu Russian uMbusi uNicholas II, okuyinto kungokwemvelo, ngoba endlini eqashisayo eyayiqhele Yakhiwa ezindinganisweni eziphakeme zaseYurophu, kwathiwa qualitatively ifakwe futhi yasendlini, ukuhlinzeka uhlu olubanzi zokwelapha.
Kuze kube manje, Gagra zokungcebeleka ngenze lo muzi hhayi kuphela iphendukele amagugu lonke, kodwa futhi enye yezindawo edume kakhulu CIS. Amakhulu izivakashi ezivela ezingxenyeni ezihlukahlukene zezwe lethu, kanye nezivakashi ezivela kwamanye amazwe ukuthola zokungcebeleka of Abkhazia Black Sea zonke izinto ephupha phakathi nezinyanga eside zomsebenzi ku "zikakhonkolo" amadolobha amakhulu. Kwamanye kungcono enomunyu futhi ukuthula nemnogolyudnyh amabhishi othile Yiqiniso spa ukwelashwa, futhi namanye - inhlanganisela eliyingqayizivele ilanga ophanayo elikhanyayo, umoya ohlanzekile, futhi amanzi olwandle efudumele, lapho impesheni ka Gagra kuvula ukufinyelela eye yasakazwa kabanzi.
abahambi abanolwazi ukunikela Wabasaqalayo izivakashi ukuhambela kwakhe kokuqala resort elimangalisayo Gagra sisehhotela "San Marino", esemgwaqweni izinyathelo ezimbalwa olwandle futhi at elifanayo ukusuka ezihlukahlukene ingqalasizinda resort-zokungcebeleka lendawo: epaki amanzi, emakethe edolobheni, ezihlukahlukene izitolo kanye zokudla. It inikeza amakamelo enikeziwe imikhakha ehlukahlukene ngobubanzi esiphezulu izinsiza ayisishiyagalolunye storey izindlu zokuhlala. Njengezinye zokungcebeleka eziningi Gagra, "San Marino" linikeza yokuhlala, ogama amafasitela uzokubonisa izindawo ongenakulibaleka yezintaba noma isikhala ulwandle. Nokho, izivakashi eziningi, ingaqhubeka asijabulele lesi idatha yempesheni, ngenxa yokuthi ukuthi akanayo lolwandle ayo - esikhundleni kukhona ikhono ukuze uthole ngokushesha ukuze ebhishi-wide, ahlanzekile, ezinakekelwa kahle kanye isihlabathi futhi amatshe "enamathela".
Ikhambi ephelele iholide bakho bangaba Gagra boarding ubudala endlini "Sunny" - indawo yayo kwenye enhle kakhulu, embozwe pine ihlathi emithambekeni ye Gagra Ibanga kunenzuzo kakhulu, njengoba lokhu fihla ipharadesi emehlweni prying, okwenza kuye uhlale endaweni esekusithekeni nokunokuthula. Ukufika e-"Sunny", izivakashi ukufinyelela ukuzijabulisa yinto ehlukile, futhi amafomu ephansi kakhulu lokuzijabulisa - entabeni futhi ebhishi. Izivakashi abakhetha yezivakashi "Sunny" indawo yabo namaholidi asehlobo, kungenziwa indawo izindlu nambili zokuhlala, lapho kuzonikezwa izihlalo 400 (amabhlogo amakamelo amaningana, amakamelo abantu 4-5 uhlale). Amakamelo anemisila zonke Izinsiza, kusukela amafasitela kanye balcony nge ukubukwa fabulous kolwandle noma zokhahlamba. Njengoba endlini boarding, futhi izivakashi ngaphandle ungathola amathilomu, izindawo zokudla, ema-disco nezinye fun. Edolobheni Gagra Ezokungcebeleka amahhotela, futhi "Sunny" azihlukile uhlele izivakashi zabo ezihlukahlukene izinkambo, ngakho hlala kulo muzi ngeke nje kujabulise, kodwa kwezemfundo.
Ukusheshisa WordPress Ngelakho
Iwayini Isi-Abkhazian: nobuchwepheshe obuphambili bezokuphepha kanye namasiko millenary
Umshini wokugeza "i-Electrolux": ukubuyekezwa. Imishini yokugeza Electrolux: izici
Ikhekhe "Eszterházy": obucayi dessert recipe
Kulinda amayunithi e ekamu lamasosha, umlando. I "Guard"
Apula Baked ku-microwave noma kuhhavini. Khetha ukunambitheka yakho
Excellent lingonberry ujamu: iresiphi zakudala, kanye amagonandoda, amawolintshi kanye izaqathe
Base "The Three Bears" (Gorny Altai)